NextMapping | Ny ho avin'ny mpanjifan'ny asa
Ny mpanjifanay rehetra dia zavatra iray iraisan'ny rehetra: Fitiavana mitondra fiara hamoronana hoavy izay manova ny orinasa, ny indostrian'ny farany ary izao tontolo izao.
Nandritra ny roapolo taona mahery dia niara-niasa tamin'ny indostria am-polony i Cheryl Cran, mpanjifa an-jatony sy mpijery an'arivony maro no nanomana azy ireo ho amin'ny asa ho avy miasa.
Cheryl Cran dia tsy Sheryl Crow fa kintana vatolampy izy! Manana an'i Cheryl ho mpandahateny ifotony ho an'ny andian-fandaharana ho an'ny ekipa mpitarika anay izahay. Niara-niasa taminay tamin'ny hetsika am-polony mahery i Cheryl izay nanaterany mpitarika 6000 teo ho eo ho an'ny ekipa vonona ho avy. Ny fahaizany manenona ny hafatry ny mpanentana hafa, ny fahaizany mampifandray ireo vondrona amin'ny hatsikana, fahafinaretana, fahamendrehana ary eritreritra fihantsiana dia tena nahagaga tokoa ary mazava ho azy izay ilainay ho akaiky ny hetsika nataontsika.